Constant Rakototafika : Mikononkonona fitokonana -
AccueilRaharaham-pirenenaConstant Rakototafika : Mikononkonona fitokonana
Fantatra àry izao fa ny lehiben’ny kabinetra sivilin’ny praiminisitra, Constant Rakototafika ihany no mikotrika ny grevy eo anivon’ny JIRAMA. Mambra ao amin’ny filan-kevi-pitantanan’ny JIRAMA ny tenany sady mpitondra tenin’ny sendikan’ny mpiasa rahateo koa kanefa mitàna andraikitra goavana eo anivon’ny fiadidiana ny praiminisitra eny Mahazoarivo.
Nanaitra ny mpanara-baovao tokoa izao fihetsiky ny lehiben’ny kabinetran’ny praiminisitra Mahafaly Olivier izao. Raha tsiahivina ny fanambarana nataon’ny Banky Iraisam-pirenena farany teo izay nilaza fa efa manomboka tafarina ny toekarena eto Madagasikara, tafakatra hatrany amin’ny 4,1% mihitsy izany fisondrotana izany raha efa niiba talohan’ny nandraisan’izao fitondrana izao ny fahefana. Nasian’ny Banky Iraisam-pirenena tsindrim-peo anefa ny maha zava-dehibe ny fitoniana raha tsy dia izany herim-po very maina fotsiny ihany ny ezaka efa vita.
Toa ny hisian’ny korontana anefa no tanjon’ny talen’ny kabinetran’ny praiminisitra, Constant Rakototafika, amin’izao fikotrehana fitokonana eo anivon’ny JIRAMA izao. Milaza miara-mahita anefa isika fa maro ny ezaka fanarenana ity orinasa mpamokatra herinaratra sy mpamatsy rano ity, raha tsy hiresaka afa-tsy ny fametrahana fotodrafitrasa vaovao, ny fanenjehana ireo mpangalatra herinaratra, ary ny fitakiana ireo trosa amina miliara maro.
Tafiditry ny viriosin’ny mpanohitra tsy mikatsaka afa-tsy ny hisian’ny savorovoro sy ny korontana, izay no azo ilazana ity talen’ny kabinetra sady mpitondra tenin’ny sendikan’ny mpiasa ity. Etsy an-danin’izany, voatohintohina ihany koa ny praiminisitra Mahafaly Olivier, satria ny mpiara-miasa akaiky azy heverina hifanome tànana amin’ny asa aman’andraikitra indray no lasa mpitarika korontana. Hiaraha-mahita eo ihany moa ny ho tohin’ny raharaha, andrasana araka izany izay ho fanapahan-kevitra horaisin’ny lehiben’ny governemanta manoloana izao zava-misy izao.
Tsy fifandrifian-javatra ny zava-misy any Toamasina, ninian’ingahy Ravalomanana Marc nampifanojoana tamin’ny ivon’ny fankalazana ny faha- 50 taonan’ny FJKM sy ny faha-200 taona nidiran’ny LMS ny famaranana ny faha-15 taonan’ny antoko TIM. Marihina fa filohan’ ny ...Tohiny